Ku iibso Bitcoin gudaha China si degdeg ah oo Amaan ah | Paxful
Ku iibso kuna Iibi Bitcoin (BTC) gudaha China
Si fudud oo amaan ah u maal gasho Bitcoin. Paxful waa meesha ugu fiican oo aad ka iibsan karto, ku iibin karto kuna diri karo Bitcoin adoo adeegsanaaya in ka badan 300 oo qaab ood ku bixinayso lacagta Bitcoin kaaga ayna ku jiraan lacag ku dirista baanka iyo WeChat Pay!
Xog dheeraad ah Akhri
U wareeg luuqada Jayniiska (简体中文(SC))
Qiimaha ugu wanaagsan—Aqoonsi ayaa loo baahan karaa
Degdeg ah—Aqoonsiga ayaa loo baahan yahay
Degdeg ah—Aqoonsi ayaa loo baahan karaa
In ka badan 300 oo qaab ood lacagta ku dhiibto
Iskuday qaab kale ood lacagta ku bixiso
1. Dooro qaab aad lacagta ku bixiso adoo ka bilaabaaya dhanka bidix
Ka dooro dookhyadaada lacag bixinta ee gudaha China. ama hel qaab kasta oo kale ood ku dhiibayso lacagta aadna kala baxayso dookhyada ugu sareeya ee hoos ku qoran.
2. Qor cadadka aad isticmaalayso
Cadadka oo ah Yuan (Chinese) Renminbi
Waxaad ku helaysaa Bitcoin
Kaydadka lacagta ee Paxful
Waxaad ku iibsan kartaa Bitcoin qaabab badan
Ku iibso WeChat Pay
1. Dooro WeChat Pay kadibna qor cadadka Bitcoin ee aad doonayso. Iibiye ayaa kaa caawin doona inaad lacagta ku shubto kaydkaaga Bitcoin ee Paxful.
2. Raac tilmaamihiisa si aad lacagta ugu dirto. Adeegsiga WeChat Pay waa qaabka ugu dhakhsaha iyo iyo badqabka badan oo Bitcoin looga iibsado gudaha China.
3. Markaad lacagta dirto, guji batoonka "Waan baxshay lacagta" kadibna sug in iibiyuhu fasaxo Bitcoin kaaga.
4. Bitcoin ka ayaa isla markaba diyaar ku noqon doonto kaydkaaga Paxful waxaadna isla markaba u diri kartaa meeshaad doonto daafaha caalamka.
Bitcoin ku iibso Lacagaha lagu Diro Bangiga Heer Qaran
1. Dooro Lacag Dirista Baanka Qaranka kadibna kor ku qor cadadka Bitcoin ee aad isticmaalayso. Iibiye ayaa kaa caawin doona inaad lacagta ku shubto kaydkaaga Bitcoin ee Paxful.
2. Raac tilmaamihiisa si aad lacagta ugu dirto baankaaga adoo u wareejinaaya iibiyaha. MA JIRAAN BARO AAD U ISTAAGAYSO LACAG BIXINTA, UMANA BAAHNID ATM.
Ku iibso lacag ku dirista baanka
Ku iibso Bitcoin Kaararka Hadiyada
Haddii aad doorato inaad Bitcoin ku iibsato kaarka hadiyada sida Kaarka Hadiyada ee Amazon markaas waa inaad lacagtooda ku dhiibtaa KAASH KELIYA Iibiyaasheenu waxay u baahan doonaan sawirka risiidka kahor intaysan kuu fasixin Bitcoin ka.
1. Tag si aad kaararka hadiyada ugasoo iibsato dukaan aagaaga ku yaala ama kaarka hadiyada oonleenka ah oo aad ka helayso Amazon.com.
2. Dooro qaabka lacag bixinta kore kadibna qor cadadka lacagta kaarka kuugu jirta kadibna guji "Hadda iibso Bitcoin". Bog cusub ayaa furmaayo oo aad ka helayso yaboon ay kuuu doortay Paxful (yabooha ugu fiican).
3. Akhri shuruudaha yabooha oo biloow ganacsiga. Soo geli dhabarka danbe ee kaarka oo la xoqday iyo risiidka. Xaqiiji inaad ka shaqaysiiso kaarka marka hore! Guji batoonka "Waan baxshay lacagta" kadibna sug iibiyaha inuu fasaxo bitcoin kaaga.
Ku iibso kaararka hadiyada
Ka caawi dadka Chinese ka inay helaan Bitcoin kadibna hel faa'iidooyin waawayn oo dhan 60% iib kasta oo aad samayso. Ku biloow inaad ku iibiso koontooyinkaaga WeChat Pay ama koontada baanka China hadda! Akhri gusmadeena bilaashka ah. Paxful ayaa hesha 1000 qof oo iibsata Bitcoin kana socda China maalin kasta.
Ma taqaanaa dad aad u badan oo doonaaya inay Bitcoin ka iibsadaan gudaha China? Adoo adeegsanaaya Dukaankaaga Bitcoin iyo barnaamijka Iskaashadaha waxaad helaysaa 2%ganacsi kasta oo la sameeyo abidkaa adoo keliya la wadaagaaya dadka lifaaq. hadda biloow.
Maxaad ku dooranaysaa Bitcoin?
Bitcoin waa hanti oonleen ah iyo qaab lacagta lagu bixiyo. Paxful ayaa fududaysa inaad Bitcoin ku iibsato kuna iibiso aalada WeChat Pay, Lacag ku dirista baanka iyo kaararka hadiyada. Bitcoin waxay noqotay hanti qiimo badan aduunkeena oonleenka ah. Waxaad u qaadan kartaa inay tahay nooca interneedka ee dahabka. Si lamid ah dahabka, qiimaha Bitcoin ayaa kor iyo hoos u socday waxaana la filayaa in koror gaabis ah ku dhaco qiimaha Bitcoin, gaar ahaana marka xiliyada dhaqaaluhu cakiran yihiin.
Kadib markaad hesho Bitcoin waxaad doontaad ku samayn kartaa. Waxaad haysataa dookha ah inaad ku kaydsato kaydkaaga Paxful, inaad Bitcoin ka ku iibsato doolarka Maraykanka ama lacagta wadan kale. Waxaad sidoo kale Bitcoin kaaga u diri kartaa kayd kasta oo kale oo Bitcoin ah.
Xagee ku qarash garaynaysaa Bitcoin?
Si aad u aragto liiska wayn ee ganacsatada aqbalaysa Bitcoin gal barta https://spendabit.co/merchants.
Ku iibso Bitcoin waxyaabaha aad jeceshahay
Khamaarka - BitCasino
Elektaroonigyada - NewEgg
U badal Bitcoin lacag kaash ah adoo adeegsanaaya ATM ka Bitcoin ee kuugu dhow - Qariirada ATM ka Bitcoin
Bitcoin waxaa hadal haysa warbaahinta
Ganacsiyada waawayn ee aqbalaaya Bitcoin